Hipica TV Selects Envivo Replay to Enhance Daily, Live Thoroughbred Racing Programming – NAB Show News by Broadcast Beat, Official Broadcaster of NAB Show – NAB Show LIVE
Home » သတင်း » Hipica တီဗီ Daily သတင်းစာ, တိုက်ရိုက်အာဇာနည်ပြိုင်ပွဲ Programming Enhance မှ Envivo ပြန်ဖွင့်ရွေးချယ်
Hipica တီဗီ Daily သတင်းစာ, တိုက်ရိုက်အာဇာနည်ပြိုင်ပွဲ Programming Enhance မှ Envivo ပြန်ဖွင့်ရွေးချယ်
Cypress, CA, May 14, 2019 – The newly launched Spanish-language Hipica TV (TSG Network) selected Envivo Replay from Variant Systems as the heart of its production system. The daily live show features races, replays and offers handicapping selections on races from The Stronach Group-owned (TSG) Gulfstream Park, Santa Anita Park, Laurel Park, Golden Gate Fields, and Pimlico Race Course. The horse race programming is available every day at GulfstreamPark.com နှင့် youtube.com/HipicaTV.
အဆိုပါ HD broadcast is independent of its English broadcast with separate producers, directors, cameras, on-air talent, race caller and now replay using Envivo Replay. Envivo Replay is being used to capture all TSG tracks to archive the day’s races, create race re-caps, and upload Spanish content to social media.
During its first month on GulfstreamPark.com နှင့် LaurelPark.com in March of this year, Hipica TV reached an average of 76,000 unique viewers each week and nearly 800,000 total views. Along with live races, Hipica TV will include live interviews, feature stories, and insights from its four anchors.
FOR-A is the exclusive seller of the Envivo Replay solution in North, Central and South America. The distribution agreement gives live event producers and broadcasters the ability to use Envivo Replay as part ofacomplete live event workflow with FOR-A’s HANABI series of video switchers, ClassX 3D graphics and video writer telestrators.
2017 အတွက်ဖြန့်ချိ, Envivo ပြန်ဖွင့်တဲ့ built-in အမှတ်တံဆိပ်စွမ်းရည်စဉ်ဆက်မပြတ်မျိုးစုံ iso-ရုပ်သံလိုင်းမှတ်တမ်းတင်စွမ်းရည်နဲ့ထိုးထွင်းသိမြင် user interface ကိုအတွက်ထုပ်ပိုးပြီးပြည့်စုံပြန်ကန်ဖြေရှင်းချက် bins clip မှမျိုးစုံကိုထောင့်များ၏တပြိုင်နက်တည်းကလစ်သိမ်းဆည်းခြင်း, ပျေါလှငျပြန်ဖွင့်ဘို့ဖွင့်စာရင်းများကို, တိုက်ရိုက်ထုတ်ဝေဖို့ကမ်းလှမ်း ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းအဖြစ်မြန်နှုန်းမြင့်စူပါ Slow-motion ကင်မရာများထောက်ပံ့။
#တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ် #လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Envivo ပြန်ဖွင့် အဖြစ်အပျက်ပြန်ကန် FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ချက်ချင်းပြန်ကန် server ကို တိုက်ရိုက်အားကစား အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် SJGolden - လှံ & Arrows TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-05-14
ယခင်: Los Angeles မြို့ 2019: EditShare Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲမှာမီဒီယာ & Entertainment ကစက်မှုဝန်ကြီး Advanced အနိုင်ရရှိမှုက၎င်း၏နောက်ဆုံးဆုချီးမြှင့်ပြ
နောက်တစ်ခု: HPA ဆုပေးပွဲကို Creative အုပ်စုများအတွက် Entries များအတွက်ခေါ်ဆိုမှုဖွင့်ပါ